Dowlada Soomaaliya ayaa si aan ka gambasho lahayn ula safatay Sacuudiga, iyada qiil uga dhigtay iney "mabda ahaan oggolaanayn faragelinta arrimaha gudaha dal madax banaan," sida uu qaba Axadiga caalamiga ah ee Qaramadda Midoobay.
Wasiir Axmed Ciise Cawad oo wareysi siiyay Laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in go'aanka ay qaadatay xukuumadda talada haysay uu yahay mid ka yimid madaxa ugu sareysay.
"Mowqifka dowladda waa sida ku cad war-saxaafadeedka. Sida aan dowlada Canada ugu taageeri lahayn inaanan la faro-gelin arrimaheeda gudaha, ayaan Sacuudiga ugu taageersan nahay inaanan iyagana la faro-gelin arrimahooda gudaha, waana kaas waxay taageertay DFS," ayuu yiri.
Wasiir Cawad ayaa wuxuu beeniyay in xukuumada Muqdisho lagu cadaadiyay mowqifka ay ka qaadatay xiisaddaan diblumaasiyadeed, isaga oo sheegay inuu yahay mid ay Madaxda Soomaaliyeed u arkaan midka ku haboon inay ka qaataan xiisadaan.
"Ma jirto cid cadaadis nagu saartay go'aanka aan qaadanahay. Waxaa jiray xiisado kale oo cadaadis nagula saari lahaa hadii ay jiri lahayd cadaadis, marka dowlada Soomaaliyeed go'aamada ay qaadaneyso iyada ayaa u madax-banaan," ayuu hadalkiisa kusii daray.
Wasiirka ayaa wuxuu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aal ku saabsaneed in dowladda aysan habooneen inay dhex-gasho "xaalad aanan iyadda qusayn," isaga oo meesha ka saarey inay saameyn ka dhalan karto mowqifka dowladda qaadatay.
Hadalka Wasiirka ayaa imaanaya saacado kadib markii xukuumadda Muqdisho ay kala kulantay mowqifka ka qaadatay xiisada labada dal dhaleecaymo xoogan oo uga imaanaya Indheer garadka, siyaasiyiinta iyo Jaaliyada Soomaaliyeed ee Canada.
Justin Trudeau oo karan-tiil galay markii looga shakiyey Coronavirus
Caalamka 12.03.2020. 20:05
Wararka 17.07.2019. 15:25
Hooyo cunugeeda gelisay gaari kulul, daaqadanahana dalacdey oo la xiray
Wararka 09.07.2019. 12:00